धर्मशास्त्र अनुसार कुन कुन वार दारी र कपाल काट्नु हुदैन ? - ज्ञानविज्ञान
प्रकृतिको नियम छ कि कपाल वा नङ निरन्तर बढ्छन् । यी मानव अंगका उत्पादन सुन्दरता बढाउने चिज समेत हुन् । मानिसहरु मन लागेको बेला कपाल वा नङ काट्ने गर्छन् । धर्मशास्त्रमा जीवनका नियमहरु उल्लेख छन् । त्यसमा दारी र कपाल काट्न नहुने दिन समेत उल्लेख छ । यी दिनमा दारी कपाल काट्दा अशुभ हुने मानिन्छ ।
यी दिनमा नकाट्नुस् कपाल शास्त्रका अनुसार मंगलवार, विहीवार र शनिवार कपाल काट्नु हुँदैन । यसले अशुभ गराउने विश्वास छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पनि मंगलबार मंगलको दिन हो ।
शरीरमा पनि मंगलको निवाश हुने यो दिनमा कपाल काट्नु राम्रो मानिन्छ । मंगलबार र शनिबार कपाल काट्दा अशुभ प्रभाव पर्ने उल्लेख छ ।
शास्त्रका अनुसार मंगलबार कपाल काट्दा ८ महिना कम हुन्छ मान्छेको आयु विहीबार लक्ष्मीको दिन मानिन्छ । यस दिन कपाल काट्दा लक्ष्मी अर्थात धनकी देवी बेखुसी भएर दरिद्र हुने सम्भावना हुन्छ ।
शनिबार कपाल काट्दा ७ महिना आयु कम हुने विश्वास गरिन्छ । बाँकि रहेका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार र आइतवार कपाल काट्नु राम्रो मानिन्छ ।
कुन बार शुभ कुन बार अशुभ
आइतबारलाई सूर्यको दिन मानिन्छ । यो दिन कपाल काट्दा धन, बुद्धी र धर्मको नाश हने महाभारतकव अनुशासन पर्वमा उल्लेख छ ।
सोमबारको दिन कपाल काट्दा मानसिक दुर्वलता हुने र सन्तानका लागि हानिकारिक हुने मानिन्छ ।
मंगलबार कपाल काट्नु उमेर अर्थात आयुका लागि नोकशानदायक मानिन्छ । कहिले काँहि यसले असामयिक मृत्यु समेत गराउन सक्ने महाभारतमा उल्लेख छ ।
नङ वा कपाल काट्न सबैभन्दा राम्रो दिन बुधवार मानिन्छ । यो दिन कपाल वा नङ काट्दा धन धान्य बढ्ने र खुसियाली आउने महाभारतको अनुशासन पर्वमा उल्लेख छ ।
विहीबार कपाल वा नङ काट्दा धन नास हुने मानिन्छ । यस दिन कपाल काट्दा मान सम्मानमा समेत ठेस पुग्ने धार्मिक विश्वास छ ।
शुक्रबार शुक्र ग्रहको दिन मानिन्छ । यो सौन्दर्यको प्रतिक मानिन्छ । त्यसैले शुक्रबार पनि कपाल र नङ काट्नु राम्रो दिन हो ।
शनिबार कपाल वा नङ काट्न अशुभ मानिन्छ । शनिबार कपाल काट्दा मृत्युक भय बढ्ने महाभारतमा उल्लेख छ ।
धन प्राप्तिका लागि शास्त्रमा धेरै उपाय उल्लेख गरिएका छन्। शास्त्रमा उल्लेख गरिएका यी उपाय अवलम्बन गर्दा धनवान बन्नमा आइरहेका अडचनबाट सजिलै पार पाउन सकिन्छ।
हिन्दू धर्ममा हात्तीलाई एक पवित्र पशु मानिन्छ । किनकी यो पशुको सम्बन्ध विध्नहर्ता मानिने भगवान गणेशसँग छ । यसकारण हात्तीको पालन तथा पूजा गर्नु अत्यन्त शुभ मानिन्छ ।
यस्तो मान्यता छ कि हात्ती पाल्ने व्यक्तिले कहिल्यै धनको अभाव वेहोर्नु पर्दैन । तर अहिलेको समयमा यति धेरै ठूलो जनावर पाल्नु संभव छैन ।
यसको विकल्पमा मानिसहरु चाँदीबाट बनेको हात्ती घरमा ल्याउने गर्छन् । चाँदीबाट बनेको हात्ती वास्तुशास्त्रका अनुसार धेरै शुभ मानिन्छ । एक त चाँदी अनि त्यसमा पनि हात्ती ! दुईटैले सकरात्मकता ल्याउने काम गर्छन् ।
चाँदीबाट बनेको हात्ती घर तथा कार्यालयमा राख्दा विभिन्न प्रकारका वास्तु दोष कम हुन्छन् । वास्तुशास्त्रमा कैयौं वास्तु दोषबारे उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता दोषका कारण व्यक्ति धनवान बन्ने संभावना पनि कम हुन्छ । यदि यी दोषलाई नष्ट गरिदियो भने घरमा लक्ष्मीको वास हुने मान्यता छ ।
कुनै पनि आकारको चाँदीको हात्ती यदि घर तथा कार्यालयको टेबलमा राखियो भने धन प्राप्तिको योग बन्न जान्छ । चाँदीबाट बनेको हात्ती घरको उत्तर दिशामा राख्नुहोस् ।
दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यसरी सुत्दा धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् । वातावरणमा चुम्बकीय शक्ति रहेको हुन्छ र यो शक्ति दक्षिणबाट उत्तरतिर गइरहेको हुन्छ ।
हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ । यसरी ऊर्जाको यात्राक्रममा भोजन पनि मजाले पच्छ । यसरी सुतेर बिहानीपख उठ्दा हाम्रो दिमाग शान्त हुन्छ र हामी ताजापन महसुस गर्छौं ।
हाम्रो मुटु शरीरको तल्लो आधा भागमा छैन, त्यो तीन-चौथार्ए माथिल्लो भागमा छ । किनभने मुटुले रक्त प्रवाह गराउँदा शरीरको तल्लो भागभन्दा माथिल्लो भागमा बढी गाह्रो हनेगर्छ, गुरुत्वाकर्षणको कारण । त्यसैले मुटुभन्दा तलको भागमा रक्त प्रवाह हुने धमनीभन्दा मुटुबाट माथि रक्त प्रवाह गर्ने धमनी बढी परिष्कृत हुन्छ ।
माथिल्लो भागमा रगत प्रवाह गराउँदा त्यो अत्यान्तै सानो सिरामा हुन्छ, अर्थात कपालको रौं बराबर । यदि त्यसमा अतिरिक्त रगतको बूँद थपियो भने, त्यो फुटेर रक्तश्राव हुनसक्छ ।
जब तपाईं उठ्नुहुन्छ, दायाँतर्फ घुम्नुहोस् र विछ्यौनाबाट बाहिर आउनुहोस् । किनभने निद्राबाट उठ्नसाथ मेटाबोलिक प्रक्रिया एकदम धीमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अचानक ओछ्यान छाड्दा मुटुमा दबाव पर्छ ।
उठ्नसाथ हात दुबै हात रगड्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईंको सबै नाडी सक्रिय हुन्छ ।
उठ्नसाथ मन्द मुस्कुराउने अभ्यास गरौं । किनभने हरेक बिहान हाम्रो निम्ति नयाँ जीवन हो ।
सुत्ने ओछ्यान सही दिशामा, सही ढंगले राखेको हुनुपर्छ ।
सयन कक्षा शान्त, खुला हावा आउजाउ गर्ने हुनुपर्छ ।
नियमित तालिका अनुसार सुत्नुपर्छ ।
खाना खाए लगत्तै सुत्नु हुँदैन ।
सुत्नुअघि मनलाई शान्त बनाउनुपर्छ । व्यवहारिक कुराहरु मनमा खेलाउनु हुँदैन ।
राती चाडै सुत्ने र विहान चाडै उठ्ने बानी गर्नुपर्छ ।
कम्तीमा सात वा आठ घण्टा मस्त निदाउनुपर्छ ।
Don't Miss it हर्निया भनेको के हो ? यसकाे लक्षण र उपचार जानिराखाैँ
Up Next के तपाईहरु पनि फेसनको नाममा च्यातिएका कपडा त लगाउने गर्नु भएको छैन ? असुभ हुन सक्छ